Esi emeghe ma wụnye faịlụ APK na PC | Gam akporosis
Manuel Ramirez | 07/04/2021 16:50 | APK, Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ
Luckily anyị nwere ike imeghe ma wụnye faịlụ APK na PC anyị nke mere na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọkacha mmasị anyị ngwa ọdịnala na egwuregwu. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike isi na obere ihuenyo ahụ pụọ gaa na nke buru ibu dịka nke PC anyị ma ọ bụ otu laptọọpụ ahụ na-adịghị njọ.
Ya mere, anyị na-aga kuzie ufodu uzo anyi nwere iji dọpụta PC anyị n'ọtụtụ oge ma si otú ahụ nwee ọ thoseụ egwuregwu ndị ahụ na nnukwu ihuenyo. Oh, na ọ gaghị enwe mgbagwoju anya dịka o nwere ike ịbụ. Anyị na-eji usoro dị iche iche aga, ya mere kpachara anya.
2 Etu esi wụnye APK na Bluestacks
3 Ijikọ Windows na Microsoft na Samsung ekwentị
4 Mepee APK na gam akporo Studio
5 Ẹkedori faịlụ APK na PC na Chrome
Ọ bụ nhọrọ kachasị mma anyị nwere ugbu a n'ihi ịdị mfe ya na ịdị mfe ya nke bụ iji wụnye ya. Ọ bụ ikpo okwu n'onwe ya nke na-enye anyị ohere imeghe ma wụnye faịlụ APK nke mere na site na ya anyị nwere ohere ịnweta ngwa ndị ahụ na egwuregwu vidiyo.
N'ezie ihe Bluestacks na-eme bụ n'ịwa ihe gam akporo wụnye n'azụ Mpaghara nke mere na enwere ike ịmalite ngwa ndị a na egwuregwu vidiyo. Ọ dịka a ga - asị na anyị bidoro gam akporo Studio, ngwa ngwa ngwa ngwa Google, mana ọmarịcha ma dịkwa mfe n’enweghị ike ịbanye na folda ya na ndị ọzọ.
Ihe kachasị mma bụ na nke a Gam akporo nwụnye na-agba ọsọ na ndabere, Ọ na-agbakwụnye n'eziokwu na ọ nwere arụnyere Storelọ Ahịa Play ka anyị wee nwee ike ịdọrọ ya ma si otú a nweta ngwa na egwuregwu niile anyị zụtara. N'ezie, anyị nwere ike iwunye APK site na emulator a ka anyị ga-egosi gị n'okpuru.
N'eziokwu, anyị ga-enwe taabụ abụọ na elu nke na-akpọrọ anyị gaa na ngwa na egwuregwu n'etiti, na nke abụọ maka ihe ga-abụ egwuregwu ndị anyị rụnyere na PC anyị.
Ma nke a bụ ma eleghị anya Uru kasịnụ nke Bluestacks, ebe ọ ga-egbochi anyị ịmechi APKs, ka anyi wee nwee ike ichota APK nke ebudatara ma zere inwe uzo ndi ozo kariri ime ya, dika Android Studio.
Nke ahụ kwuru, ekwesịrị ịkọwa ya na ịmalite ngwa na PC pụtara anyị na-eche ihu na ngwanrọ a na-etinyebeghị nke ukwuu maka ngebichi ndị a akụkụ buru ibu dị ka ihe nchịkwa ma ọ bụ njikwa, dị ka òké.
N'ikpeazụ, na ọ bụ ezie Bluestack yiri ka ọ na-enye anyị ahụmịhe kachasị mma, eziokwu ahụ bụ na a na-emelite ngwa ndị ahụ nwere ike iduga na njehie na gburugburu ebe obibi gam akporo a, yabụ attentionaa ntị na nke a n'ihi na ọ nwere ike iduga gị n'okporo ámá ilu.
Ị nwere ike họrọ ibudata ya n'efu dị nnọọ ka na-aga site na ha na ndenye aha nlereanya.
Etu esi wụnye APK na Bluestacks
Anyị chọrọ ịhapụ akụkụ a maka ngalaba n'onwe ya, nke ahụ bụ Bluestacks na-enyekwa ohere ntinye nke APK anyị gbudatara na mbụ site na saịtị dị ka apkmirror (otu n'ime ndị a tụkwasịrị obi na anyị na-akwado mgbe ịchọrọ ịnweta otu APK).
N'ikwu ya, ọ dị mfe:
Anyị malitere Bluestacks site na PC anyị
nos gaa na taabụ "Ngwa m"
Site na nkuku na mpio Anyị na-ele anya maka nhọrọ «Wụnye APK»
Anyị na-achọ faịlụ a kwadoro na PC anyị ma wụnye ya.
Ijikọ Windows na Microsoft na Samsung ekwentị
Samsung nwere "Jikọọ na Windows" na enyemaka dị oke ọnụ nke Microsoft, jisiri ike ịmalite ngwa ndị anyị rụnyere na ekwentị mkpanaaka anyị na PC ma ọ bụ laptọọpụ anyị. Nke ahụ bụ, ngwa ọ bụla anyị ji aka anyị wụnye na Samsung mobile nwere ike ịmalite site na desktọọpụ nke PC anyị.
Anyị nwere ugbua kwupụtara n'akwụkwọ dị iche iche uru niile nke Ijikọ na Windows yana ngwa Ekwenti gi sitere na Microsoft. Na uru dị ọtụtụ, ebe anyị nwere ike ịnata oku ekwentị ma ọ bụ ọbụna gafere faịlụ ngwa ngwa mgbe anyị jikọtara ngwaọrụ anyị abụọ ma ọ bụ ọbụna nwere clipboard idetuo na mado ngwa site na saịtị gaa na nke ọzọ.
Anyị nwere n'ezie na anyị Androidsis video channel a nkuzi kedu ihe ọ na-akụziri gị esi emeghe ngwa ị nwere na mkpanaka gị na PC gị. Nke kachasị, na mmelite kachasị ọhụrụ nke ngwa Windows Phone gị, ịnwere ike mepee ọtụtụ ngwa ọdịnala n'otu oge ahụ ọbụnakwa tụgide ya na ogwe ọrụ Windows.
Anyị na-eche ihu otu n'ime nhọrọ kacha mma, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ezie tupu otu na anyị nwere ike imeghe APKs na WindowsKama, anyi ga aga na mkpanaka anyi, budata apk ma tinye ya ka ibido ya mgbe emechara site na ngwa Windows Phone gi.
Mana ọ bụrụ na anyị chọọ ịdị mfe na ịdị mfe, na anyị nwere Samsung mobile yana Windows PC, anyị nwere ike iwunye ma mepee APK ndị ahụ, yana ngwa na egwuregwu ndị anyị rụnyere site na nkasi obi nke Windows na Samsung.
Mgbe o kwusịrị nke ahụ, anyị ga-eme n'ezie mirroring zuru ezu, ma ọ bụ ihe ga-abụ ihe nledo ihuenyo mkpanaka, ọ bụ ezie na ọ nwere usoro nke na-egosi na anyị jizi ngwa ahụ na PC ma ọ bụ laptọọpụ anyị.
Mepee APK na gam akporo Studio
Anyị ga-aga usoro kachasị dị mgbagwoju anya niile, ma Ọ bụ kpọmkwem ihe onye nrụpụta chọrọ iji mepụta ma ọ bụ gbanwee ngwa ahụ ga-eji nke imeputara na Android Studio. Ihe na-adọrọ mmasị banyere Android Studio bụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ ngwaọrụ dị iche iche na ụdị ọ bụla nke gam akporo. Ọ bụ na anyị nwere ike ịmalite ụdị ochie iji nwee ike ịmalite ngwa ahụ nke ngwa nke akwadoro, yabụ ọ bụ ahụmịhe zuru oke n'onwe ya.
Ndị a ga-abụ ihe kachasị mkpa:
Anyị na-aga ịwụnye gam akporo Studio: Weebụsaịtị Google
Anyị wụnye Android Studio na PC
Anyị na-amalite ngwaọrụ ọ bụla iji toomie
El Ngwa anyị budata anyị were ya na folda Ngwaọrụ na ndekọ gam akporo Studio SDK
Anyị ga-aga na nchekwa ebe APK dị ma anyị bido iwu a n’ikike onye nchịkwa jiri iwu Windows:
ADB wụnye filename.apk
Ebee filename.apk ga-abụ aha nke ngwa ahụ na anyị chọrọ ịgbakwunye na ndepụta ngwaọrụ nke mebere
El Nnukwu nkwarụ nke ọrụ a bụ na ọ na-efu ụfọdụ isi ihe dị mkpa dị ka Ọrụ Google Play, yabụ belụsọ na ọ bụ ngwa dị mfe, ka anyị na-achọ ịmalite ngwa nke ngwa a ma ama, ọ ga-efu anyị i imitateomi ahụmịhe ahụ. A na-eme Studio Studio maka ndị chọrọ ịnwale ngwa ha tupu ha ebipụta nsụgharị ikpeazụ na Storelọ Ahịa Play, mana site na ịnwale APK, anyị nwere ike.
Ẹkedori faịlụ APK na PC na Chrome
Ma ugbu a, ị ga-eche ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọ bụla ghara sere ihe emulator dị ka ndị a kpọtụrụ aha inwe ike ịmalite faịlụ faịlị. Ee enwere ma ọ bụ site na ihe nchọgharị Chrome na ndọtị nke ga-enyere anyị aka ịrụ ọrụ a.
Ngwá ọrụ a nke ndi mmepe ngwanrọ mebere maka sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ya mere, ọ na-enye anyị ohere site na Chrome i emomi APK ọbụna na sistemụ ndị ọzọ dị ka MacOS ma ọ bụrụhaala na anyị nwere otu ihe nchọgharị ahụ arụnyere.
para nwee ike ịmalite faịlụ APK na Chrome anyị ga-elele usoro ndị a:
Wụnye ihe nchọgharị Chrome ma gaa ARC Welder: Budata ndọtị
Anyị na-agbakwunye ARC Welder na Chrome
Budata ngwa na PC ma ọ bụ laptọọpụ anyị
Anyị na-ahọrọ mbadamba ma ọ bụ mobile na nke anyị chọrọ ẹkedori ngwa
Pịa na bọtịnụ ule iji chọpụta na ngwa ahụ na-arụ ọrụ nke ọma
Pịa na «Launch ngwa»
Ugbu a anyị nwere ike bido APK na PC anyị wee nwee obi ụtọ ma ọ bụ nwalee ngwa ahụ na kọmputa anyị. Ugbu a naanị anyị ga - ahọrọ nke n'ime usoro egosipụtara nwere ike ịmasị gị. Anyị na-akwado Bluestacks n'ezoghị ọnụ n'ihi na anyị nwere ibudata, wụnye ma banye na akaụntụ Google anyị ka anyị gaa n'ihu ntinye nke APK site na integratedlọ Ahịa Play ma ọ bụ APK site na usoro ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Esi emeghe ma wụnye faịlụ APK na PC